ဘောလုံးလောင်းကစားခြင်း - VENUS1688
ဘောလုံးလောင်းနည်းနဲ့ နောက်ထပ် အွန်လိုင်းမှာဘယ်လိုကစားနည်းတွေလောင်းလို့ရလဲဆိုတာ ဒီနေ့မှာတော့ ကာစီနိုအွန်လိုင်းတွင်ဘောလုံးလောင်းနည်း အပြင် ဘက်စကက် ဘော/လက်ဝှေ့လောင်းကစားနည်း/ တင်းနစ်အစရှိတာတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်.
ဘောလုံးလောင်းကစားသည် ဥရောပမှ Premier League, La Liga, Serie A, Champion League ….. စသည်တို့ကို အပေါ်အသင်း နှင့် အောက်အသင်းခွဲကာ ပေါက်ကြေးအတိုင်း လောင်းကစားခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာ အချိန်ပြည့်ဂိုးပေါင်းလောင်းခြင်း၊ ပထမပိုင်း ဂိုးပေါင်းလောင်ခြင်း၊ ကစားပွဲဂိုးပေါင်းလောင်းခြင်း၊ ဂိုးပေါင်း စုံ/မ လောင်းခြင်း၊ မိနစ် ၉၀ ပွဲရလဒ်လောင်းခြင်း အနိုင်ရမည့်အသင်းလောင်းခြင်း ပထမဆုံးဂိုးသွင်းမည့်အသင်းလောင်းခြင်း စတာတွေနဲ့ အလောင်းအစားတွေလုပ်လို့ရပါတယ်။
နိုင်ငံတကာဘောလုံးပွဲအပြင် အခြားအားကစားများကိုလည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာလောင်းနိုင်ခြင်း
အွန်လိုင်းအားကစားဝက်ဆိုဒ် တွေမှာဘောလုံးပွဲအပြင် လက်ဝှေ့ပွဲတွေ၊ ဘက်စကက်ပွဲတွေလက်ဝှေ့ အားကစားကိုဘယ်လိုမျိုးတွေလောင်းကြေးထပ်ကြလဲဆိုရင်….
တိုက်ပွဲတွေဟာယဉ်ကျေးမှုစတင်ကတည်းကလူတွေကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်။ ရိုးရိုးလေးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလက်ဝှေ့ထိုးပွဲတွင်ကစားသမားနှစ် ဦး၊ ၁၀-၁၂ ကြိမ်နှင့်ရလဒ် ၃ ခုသာရှိသည်၊ ကစားသမား ၁ အတွက်အနိုင်ရရှိခြင်း၊ ကစားသမား ၂ အတွက်အနိုင်ရရှိခြင်းသို့မဟုတ်သရေပွဲဖြစ်သည်။
သင်၏အလောင်းအစားများအနိုင်ရရန်အကြီးမားဆုံးသောအခွင့်အရေးအတွက်သင်လောင်းကစားရန်စီစဉ်နေသည့်အားကစားနှင့်ကစားသမားများကိုအသေအချာလေ့လာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ဘတ်စကက်တွင်လဲ အွန်လိုင်းမှာပါ ကစားလို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဘတ်စကက်တွင်လဲ အွန်လိုင်းမှာပါ ကစားလို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ်စကတ်ဘောလောင်းခြင်းတွင်အောင်မြင်စွာအနိုင်ရရန်၊ လိဂ်တစ်ခုစီ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
အကျော်ကြားဆုံးများမှာများများစားစားမဟုတ်ပါ။ NBA (အမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း)၊ VTB United League (VTB ယူနိုက်တက်အဖွဲ့ချုပ်), အဆိုပါ Euroleague နှင့် Eurocup ။ဘတ်စကတ်ဘောကစားနည်းနှင့် လောင်းပြီးငွေရှာဖို့အတွက်ဆိုရင် အထိရောက်ဆုံးနည်းဗျူဟာများနဲ့ အသင်းတွေအကြောင်းလေ့လာထားသင့်သည်။
တင်းနစ်မှာဆိုရင်လအသင်းအားကစားထက်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်၊ တင်းနစ်သည်ဒဏ္ဋာရီများစွာကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ပရိသတ်များများစွာရှိသည်။ တင်းနစ်ကစားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းရျ်အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာသရေပွဲမရှိခြင်းကြောင့်ရလဒ် ၂ ခုသာရှိသည်။ ကစားသမား ၁ အတွက်အနိုင်ရရှိခြင်းသို့မဟုတ်ကစားသမား ၂ အတွက်အနိုင်ရရှိခြင်း။
စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲနေသောရလဒ်များအကန့်အသတ်ရှိသော်လည်းသင်အလောင်းအစားပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိနေသေးသည်။ သင်တစ် ဦး ချင်းစီပြိုင်ပွဲ, အလုံးစုံပြိုင်ပွဲ, တစ် ဦး ချင်းစီအသီးအသီးနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအချက်ပေါ်တွင်ပင်လောင်းနိုင်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာ အလွယ်တကူ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေပဲ ပွဲစဉ်တွေကို ခန့်မှန်းပြီး လောင်းကြေးတွေထိုးလို့ရနေပါပြီ။
ဒီလိုကစားနည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး…. ယုံကြည်မှု စိတ်ချရမှု တို့ဖြင့်… စိတ်ကျေနပ်စွာ ကစားချင်ရင်.. ကျွန်တို့ website က ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။